अध्ययन गर्ने केही सरल तरिका - NepalDut NepalDut
अध्ययन गर्ने केही सरल तरिका
डा टेकनारायण पौडेल पोखरा
चैत्र १० गते २०७६
बिधार्थी भाइबहिनीहरु, यो लेख ले खास गरि यो पल्ट मनोबैझानिक रुपमा असर परेका कक्षा १० का भाइ बहिनिको लागि सम्बोधन गर्ने कोसिस गरेको छु । हुन त अरु बिधार्थीको लागि पनि यो तरिका अबलम्बन गर्दा शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सहज हुनेछ । कक्षा १० को परिक्षा स्थगनले पारेको पिडा म सहज महसुस गर्न सक्छु । एउटा असल शिक्षक अनि प्राचार्यको नाता ले तिमीहरुलाइ म येति मात्र भन्न सक्छु, यो एउटा मौका हो जीबन बदल्नको लागि बदल्नको लागि !! यसको अर्थ स्वास्थ्य बानि अबलम्बन गर्दै गर मन एक चित्त् भएर नियमित तालिका बनाएर अध्यन नगर्ने हो भने सायद उपलब्दी सम्भब नहोला ! आशा छ तिमीहरु आफ्नो भबिस्यप्रति चिन्तित छौ र मैले तल दिएको सामान्य निय को पालानासहित काम गर्ने छौ अनि सफलता हात पार्न लाग्ने छौ ।
जीबन बदल्ने मौकाको लागि आफुमा भएको सकारात्मक उर्जा लाइ थप उत्शाहित बनाउनु जरुरी छ । त्यसका लागि म मानब भएर जन्मेको इतिहास रचेर मर्नको लागि हो भनी सोचलाइ बदल्नु जरुरि छ । अनि मात्र सफलता सम्भब छ ।
मैले मेरो यो लेखको आशय खास मा कसरि अध्यन गर्ने लामो समय घर मा पत्यार लाग्दो हुन्छ भन्ने चिन्ताको लागि निवारण गर्न सहयोगी होस् भन्ने हो । पालान गर्नु अनि उच्चतम नम्बर ल्याउनुको लागि कम्बर कस्नु सुन्दर भबिस्य निर्माणको लागि ।
सबैभन्दा पहिला आफ्नो दैनिकीलाइ बदल्नु पर्छ म हिजो जे गर्थे आज त्यै गर्छु भन्ने होइन । म आज जे गर्दै छु त्यैसले भोलिको सुख का लागि बाटो खुला गर्दै छ भन्ने कुरा अनि अनुभूति गर्दै आफ्नो मन लाइ उर्जावान बनाउनु पर्दछ । कम्ति मा २४ घण्टाको दिनमा उमेर अनुसार सुताई हुनु पर्छ । स्वस्थ अनि सधै उर्जा वान बन्नको लागि । अब ७/ ८ घण्टा सुतेर सरिरलाइ राम्रो संग स्वस्थ राखने काम गर्नु, आफ्नो दैनिकी जहिले पनि सकारात्मक कुरा बाट सुरुवात गर्नु !
केहि बुदा तल उल्लेख गरेको छु
१) समय ब्यबस्थापन (Time Management) : बिधार्थीको लागि पहिलो महत्व पूर्ण अध्यन सिप मा समय ब्यबस्थापन पर्दछ । आजको दिनमा जो जो बिधार्थी ले नियमित हरेक बिसयलाइ महत्व दिएर अध्ययन गर्दछन । त्यस्ता बिधार्थीले राम्रो नतिजा ल्याएको पाहिएको छ। नियमियत रुपमा सजिलो बिसयमात्र अध्ययन गर्ने अनि जटिल बिसयलाइ महत्व नदिने बानिले गर्दा नतिजामा असर गर्दछ । बरु जटिल बिसयलाइ बढी समय प्रदान गर्नु राम्रो हुन्छ । हरेक बिसयलाइ नियेमित समय तालिका बनाएर अध्ययन गर्दा बोरिङ्ग हुने सम्भाबना कम हुन्छ । कहिलेकाही तेसरी लामी समयसम्म अध्ययन गर्दा बोरिङ्ग महसुस भयो भने हरेक बिसयको अध्ययन समय लामो हुनु हुदैन अरु छोटो छोटो खालि समय राख्नु पर्छ ।
२) एकाग्रता (Concentration) : आजको राम्रो नतिजा को लागि जति पढिन्छ, त्यति नै ध्यान केन्द्रित गर्नु राम्रो मानिन्छ । हाम्रा बाबुनानिहरुले अगाडि पुस्तक राख्यो अनि दिमागलाइ कतै अन्तै केन्द्रित गर्ने गरेको पाइन्छ । मन र मस्तिस्कको कुशल संयोजन नै सकारात्मक नतिजा हो । त्यसैले बाबुनानिहरुले दिवा सपना मा होइन, भबिस्यको सपना मा आफुलाई उर्जावान बनाउनको लागि जति सकिन्छ ध्यान केन्द्रित गर्ने कुनै कुरा ले ध्यान अन्यत्र तान्यो भने त्यो बेला मा अध्ययन गर्ने काम छाडेर बरु रिफ्रेश को लागि निस्कनु राम्रो हुन्छ । जुन बिसयमा ध्यान केन्द्रित छ त्यो नै दिमागमा बस्ने हो तेसैले हरेक व्यक्तिले आफ्नो ध्यान आफ्नो काम वा गरिरहेको कुरा मा केन्द्रित गर्दा परिणाम प्राप्ति हुन्छ ।
3) पढाइ सिप (Study Skill ): यो पनि बिधार्थीमा हुनु पर्ने अर्को महत्व पूर्ण सिपमा पर्दछ ।बिधार्थीले किताब पढेको छ तर उसले बुझ्नुपर्ने बुझेको छैन भने त्यस्तो पढाइको खासै अर्थ हुदैन । थोरै पढ्नु तर बुझेर पढ्नु नै श्रेस्कर हुने कुरा महत्वपुर्ण मानिन्छ । अध्ययन सिपको कारणले हरेक बिसयमा बिधार्थीलाइ धेरै नम्बर ल्याउन अनि तेस्ता बिसय को स्मरण शक्ति लामो समयसम्म रहने हुन्छ
४) नोट लेखाइ (Note Taking ): अंग्रेजीमा नोट लेखाइलाइ Note Taking भनिन्छ । हरेक बिसय अध्ययन गर्दा महत्वपुर्ण शब्दलाइ आफ्नो कपिमा उतार्नु नै येस्को सार हो । जब अध्ययन गरिन्छ, अध्ययन गरेका कुराको टिपोट गर्नु अनि तेस्ता टिपोट गरिएका कुराबाट किताब वा पाठ को विवरण बनाउनु जरुरि छ । येस्बाट बिधार्थीलाइ लामी समयसम्म पाठ सम्झना अनि हरेक कुरालाइ आफ्नो भाषा मा ब्याख्या गर्न पनि सहज हुन्छ भने बिधार्थी बढी चलाख र बढी ब्याख्या गर्न सक्ने हुन्छ ।
५) लेखाइ सिप (Writing Skill): लेखाइ कलाले पनि बिधार्थीलाइ नतिजामुखी बनाउदछ ।एउटा सफल बिधार्थीको लेखाइ कला नै उसको गहना हो । हेर्दा आकर्षक देखिने लेखाइ अनि हरेक प्याराग्राफपछी को १/२ लाइन खालि छोड्ने गर्नु राम्रो हुन्छ । जसको कारणले जचाकीलाइ नम्बर दिन बढी मनपर्ने हुन्छ । अगाडीको दुरी अनि पछाडीको दुरी लाइ मिलाएर आकर्षक अक्षर लेख्नु ले बिधार्थी को स्वभाभ कस्तो छ भन्ने कुरा पनि सहज हेर्न र बुझ्न सकिन्छ ।
६) परिक्षा तयारि (Test Preparation) : हरेक बिधार्थीले आज होइन, भोलि पढ्छु भन्छ भने सम्झनु उसले आफ्नो जीबन बर्बाद गर्दै छ । एक वर्षमा आफ्नो कोर्सलाइ हिसाब गर्नु अनि हरेक दिनमा कति अध्ययन गर्नु पर्छ तेस्को आधार मा अध्ययन गर्नु जरुरि छ । अब अहिले कक्षा १० का बाबुनानिले कसरि योजना बनाउने अब छिट्टै परिक्षा हुन्छ यो बिषय जटिल हुन सक्छ । तथापि बिधार्थीले कम्तिमा १ महिनाको योजना बनाएर परिक्षाको तयारि गर्नु बान्छनीय हुन्छ । तेस्को लागि हरेक दिन हरेक बिसयको लागि निश्चित कोर्ष सक्छु भन्ने संकल्प गरेर नै योजना बनाउनु राम्रो हुन्छ र नतिजा परिणाममुखी हुनेछ ।
७) परिक्षा चिन्ता ब्यबस्थापन (Test Anxiety Management ) : हरेक व्यक्ति जतिसुकै क्षमतावान होस् ति हरेकलाइ परिक्षा भनेपछि चिन्ता लाग्नु स्वाभाविक हो । कहिलेकाही हामीले देखेका छौ, परिक्षा भनेपछि छिटो छिटो पिसाब लाग्ने अनि मुटु चाडो चले जस्तो हुने अनेक खालको असहजता महसुस हुने हुन्सक्छ । यो सबै हुनुको पछाडी आफ्ना बानुनानिलाई सहज रुपमा सिकाइ नभएर नै हो भन्ने लाग्छ । परिक्षा पनि एउटा सामान्य प्रक्रिया मात्र हो, १ वर्षसम्म ह्गरेको तयारिलाइ केवल २/३ घण्टा मा लेख्नुमात्र हो । यो आफुले नियमित ठाउमा नभई अन्यत्र जादा पनि आफ्नो नियमित स्थान जस्तै अनुभूति गराउनु जरुरि छ ।
सबै मानिस उस्तै हुन, सबै कुरा उस्तै हो अनि सबै ठाउ उस्तै हो भन्ने महसुस गराउनु नै परिक्षा को चिन्ताको ब्यबस्थापन हो । समग्रमा बिधार्थी बाबुनानिलाइ मेरो सुझाब के भने केवल स्थान अनि गार्ड मात्र परिबर्तन हुन आफुले गल्ति नगरी कन सहज रुपमा लेख्दा कुनै ले पनि अप्ठ्यारो गर्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरि छ ।
समग्रमा हाम्रो दृस्टीकोण बदल्नु नै उच्चतम नतिजा को आशा हो भन्न सकिन्छ । हरेक बिधार्थी जो जो लामो समय घारमा बस्चान, ति हरेकले आफ्ना जटिलतालाइ सामान्यकरण गर्नु सक्नु उच्चतम नतिजा का मार्ग हो ।
अन्त्यमा बाबु नानि हरु जसले उच्च लक्ष्य लिन्छ त्यै नै सफल भएका छन् आज सम्म को दुनिया मा !! आअफ़ुलाइ सफल बनाउने हो भने लक्ष्य बदलौ सफलता को शिखर चुम्न सकिन्छ!!
सफल नतिजाको लागि अध्ययन गर्ने शैली बदलौ, सफलता प्राप्ति टाढा छैन । सबैमा शुभकामना !
लेखक हिमालयन बोर्डिङ स्कुल पोखरा १७ घारीपाटनका प्राचार्य हुनुहुन्छ ।